United Kingdom - kwelinye lamazwe ebaluleke kakhulu emhlabeni. I eminyaka ubudala umlando, amasiko ocebile, amasiko kanye abantu abaningi bakhangwa kusuka emhlabeni wonke hhayi kuphela kwezokuvakasha kodwa nezalo ukuqeqeshwa noma yokuhlala.
Inhloko-dolobha yaseBrithani - London - ngokusho izibalo, ifakiwe ohlwini lamadolobha amadala kakhulu eqolo emhlabeni. Kuyinto kule enhlokodolobha kwamasiko uzama ukuvakashela, ukuba zithenge umhlaba futhi ukusungula izixhumanisi bonke osopolitiki esiphakeme.
Greater London zamila eMzini lasendulo yaseLondon, maphakathi okuyinto ephawuleka edwaleni London. London City sakhula futhi lakhula ngokushesha phakathi nokubusa kuka- Queen Victoria. Kuze kube manje, inhloko-dolobha yase-UK - lokhu ingenye izikhungo main, lapho izindaba zakhe kukhona nosomabhizinisi ezibaluleke kakhulu, kanye isayithi zokukhokhelwa eziningi zezimali. Ngaphezu kwalokho, akunakwenzeka ukuba overestimate umthelela walo emhlabeni wonke zonke izici zokuphila ezombusazwe nezamasiko emhlabeni. Izivakashi uthande lo muzi ubuhle baso futhi emkhathini esiyingqayizivele ehlanganisa ngamasiko asendulo futhi ijubane yesimanje yokuphila.
Ukuvakasha - yaba enye yezindawo ezilinywayo amaningi athuthukile e-UK. Eqinisweni, kunzima kakhulu ukubona zonke izikhumbuzo izakhiwo kanye art: Buckingham Palace, i-National Gallery, e -British Museum, iTower of London - kungcono nje uhlu encane ezikhangayo, ngaphandle kokuba ukuvakashela lelo aluphumeleli iyiphi uhambo olulodwa.
Ngokuthakazelisayo, inhloko-dolobha yase-UK has a endaweni ezahlukene kuye ngokuthi nenchazelo eklanywe njengomumo womhlaba noma zezombangazwe. Ukuze amabalazwe London - yonke indawo eyidolobha, Nokho, ngokuvumelana izibalo ezisemthethweni, London siqukethe imizi emibili: edolobheni of Westminster kanye City of London.
Ukufika e-London, zonke izivakashi liqinisekile ukuthi yini esingakwenza ngaphandle olimini lwesiNgisi livela kwelesiLatini. Nokho, uma, lalelisisa, intsha e-London kanye nabantu abadala abakhuluma izilimi ezihlukahlukene. Lokhu akusona isimanga, ngoba izakhamuzi eziningi edolobheni - kusukela wangaphambili amakoloni Enkulu YaseBrithani.
Akuyona imfihlo ukuthi iningi abazali babe okwanele kwezimali, ozama ukuthumela izingane zabo ukufunda e-UK. Ezemfundo wathola on ensimini yezwe baziswa emhlabeni wonke. Ukufundisa eLondon nakwezinye izindawo kuleli zwe iqhutshwa ngokuphelele ngesiNgisi, iqinisekisa ukuthuthukiswa yayo "ukuphelela." imfundo English - enye indawo elikhulula izwe on isizinda emhlabeni.
Okusanda, inhloko-dolobha ye-United Kingdom waphoqeleka ukuba athathe lenqwaba izivakashi abeza ukuzobona ezinhle nomshado phakathi pair of Keyt Middlton futhi ePrince William. Lo mkhosi wawenziwa Westminster Cathedral. Lo mbhangqwana wathola siyakuhalalisela kusuka ezihlukahlukene izivakashi phakathi kwabo kwakukhona Dmitry Medvedev uNdunankulu waseBrithani uDavid Cameron nezinye osaziwayo abaningi abavela emhlabeni jikelele.
Njengoba emadolobheni amaningi amakhulu emhlabeni, eLondon ahlalisane ndawonye abantu yezinkolo nobuzwe. Nokho, uhulumeni wase asekelwe inqubomgomo yombuso amaningi, uNdunankulu waseBrithani uDavid Cameron ngemva Angela Merkel wakhuluma ngokumelene le mfundiso. Wanikela ukwethula emaqenjini ezizwe futhi imiphakathi kukhona nezimfuneko ezithile, ngaphandle okuyinto ngeke bathole ukwesekwa isimo, hhayi kuphela etindzabeni tetimali, nabo ngeke bavunyelwe ukukhuthaza isiko isigwebo sabo emajele namanyuvesi. Lo mbuzo namanje evulekile futhi namanje.
Ngo-2012, intsha yaseLondon, osaziwayo edumile emhlabeni wonke, isizukulwane omdala kanye nezivakashi eziningi uzobe ngabomvu kokuqala Olympic Asehlobo, okuyinto izobanjelwa inhlokodolobha British. Le abadlali eyaziwa kakhulu bazohlangana ukuze ukuthola ukuthi ngubani kungcono, okufanelekelayo udumo kanye nemiklomelo. I liwuphawu Imidlalo yama-Olympic eLondon kuyoba isithombe sakhiwa ngemapholigoni ezine okungajwayelekile ukuthi bamele amadijithi konyaka 2012 ngeke afakwe ingxenye ehlukile ye-polygon -Olympic izindandatho futhi igama dolobha.
Honeysuckle okuhlobisa, betshala nokunakekela
Ukuba yingcweti ukunitha: abesifazane isigqoko (imodeli classical wenza spokes)